युवा ज्योतिषी शिवराज रेग्मी भन्छन्, ‘कर्म गर्ने, भाग्यमा आशावादी रहने’ | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
युवा ज्योतिषी शिवराज रेग्मी भन्छन्, ‘कर्म गर्ने, भाग्यमा आशावादी रहने’
युवा ज्योतिषी शिवराज रेग्मी भन्छन्, ‘कर्म गर्ने, भाग्यमा आशावादी रहने’ अहिले ज्योतिष शास्त्रप्रति असहमति जनाउने वा अविश्वास गर्ने जमात जति बढ्दैछ, उत्तिनै यस क्षेत्रतर्फ युवाहरुको आकर्षण पनि बढ्दो छ ।
युवा उमेरमै ज्योतिष पेशा अंगालेर यसमा रमाइरहेकाहरु पनि प्रशस्तै छन् । त्यसमध्येकै हुन् शिवराज रेग्मी, जोसँग हामीले वर्तमान अवस्थामा ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी व्याप्त भ्रम र त्यसको यर्थाथबारे कुरा ग¥र्यौं ।
ज्योतिषशास्त्र र त्यसँग जोडिएका अनेक पक्षबारे उनीसँग गरेको कुराकानीको सार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान ज्योतिष शास्त्र, जो आफैमा एक विज्ञान हो ।
यसमा ग्रह, नक्षत्रहरुको अवस्थितीको गणना गरेर त्यसको प्रभाव खासगरी मानविय जीवनमा के हुन्छ भन्ने कुरा निकालिन्छ । यो गणित हो । यसमा अविश्वास गर्नुको खास तुक छैन । नबुझ्नु भनेको अलग कुरा हो ।
ज्योषिती गर्नु भनेको भ्रमको खेती गर्नु होइन, यो धार्मिक आडम्बर पनि होइन ।
हुन त कतिले यसलाई ‘ठगिखाने भाँडो’ बनाएको छ । तर, जो वास्तवमै राम्रा ज्योतिष हुन्, जसलाई ज्योतिष शास्त्रको राम्रो र गहिरो ज्ञान छ, उनीहरुले यस्तो कुकार्य गर्दैनन् ।
हामी चिना,कुण्डली हेराउने भन्छौं, हात हेराउने भन्छौं, चिना जुराउने भन्छौं ।
यी सबैको अर्थ र सार्थकता त्यसबेला मात्र हुन्छ, जब तपाईंको जन्म, तिथी सबै दुरुस्त मिलेको छ ।
र, तपाईंले सही ज्योतिषलाई देखाउनु भयो भने, त्यसको सही गणना हुनसक्छ । सही भाग्यफल फेला पार्न सकिन्छ ।
अक्सर हामी जस्तोपायो त्यस्तै ज्योतिषलाई विश्वास गर्छौं । खासै ज्ञान नभएका शिक्षकलाई सम्बन्धित विषयमा जानकारी मागियो भने उसले अधुरो वा असत्य जानकारी दिन्छ ।
ठिक यसैगरी असक्षम ज्योतिषले पनि सही गणना निकाल्न सक्दैन ।
उनीहरुले चिना हेर्न सक्छन्, हात हेर्न सक्छन् तर त्यसको सही नतिजा निकाल्न सक्दैनन् ।
खासमा कसैको दशा–ग्रह हेर्ने, भाग्यफल हेर्ने, शुभ–अशुभ थाहा पाउने भन्ने कुरा ज्योतिष शास्त्रबाटै गर्न सकिन्छ ।
तर यसका लागि ग्रह, नक्षत्र, तिथी, बारहरुको सही संयोजन मिलाउनु आवश्यक छ । आकसिय पिण्डहरु सूर्य, चन्द्र, मंगल, वृहस्पति आदि कुन अवस्थामा छ भन्ने कुराकै आधारमा ज्योतिष–कर्म गर्न सकिन्छ ।
चिना–टिपन बनाउनैपर्छ ? जसरी हामी जन्मेपछि जन्मदर्ता आवश्यक हुन्छ । जसरी उमेर पुगेपछि नागरिकता आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी जन्मपछि चिना–टिपन आवश्यक हुन्छ ।
चिना–टिपनले हामी कुन अवस्थामा, कहिले जन्मिएको हो भन्ने कुरा दर्शाउँछ र त्यसैको आधारमा हामीले आफ्नो ग्रहदशा, शुभ–अशुभ, फाप–अफाप, विवाहजस्ता यावत् कुराको सही आंकलन निकाल्न सकिन्छ ।
खासमा कुण्डलीलाई मानव जीवनको सुक्ष्मद्रष्टा दर्पण पनि भन्ने गरिन्छ ।
यसलाई गहन ढंगले विश्लेषण गरिएको पत्रलाई हामी चिना–टिपन भन्छौं ।
विवाहअघि केटा र केटीको चिना किन जुराउने ?
विवाहअघि हुनेवाला दुलहा र दुलहीको चिना जुराउने गरिन्छ ।
यसले के थाहा हुन्छ भने, उनीहरुको भावी दाम्पत्य जीवन कस्तो हुन्छ ? किनभने सबै मानिसको स्वभाव एकै हुँदैन ।
प्रवृत्ति एकै हुँदैन । उनीहरुको सोंच–चिन्तन, व्यवहार भिन्न हुन्छ । यावत् कुरा उनीहरुको जन्मको आधारमा तय हुन्छ ।
यो कुरा चिनामा दर्शाइएको हुन्छ । त्यही कारण यदि उनीहरुको चिना मिलेन भने त्यस्तो दाम्पत्यमा खटपट हुन्छ, मेलमिलाप हुँदैन । घरबार बिग्रन्छ ।
घर निर्माणअघि वास्तु किन हेराउने ?
वास्तु विज्ञानलाई अहिले कतिपयले अविश्वास गर्छन् । जबकी यो विज्ञान हो ।
घर, भवन निर्माणअघि वा घर स्थानान्तरण अघिके गर्नुपर्छ भनेर वास्तु विज्ञानमा उल्लेख छ । कुन दिशामा, कस्तो भूगोलमा, कसरी, कहिले घर निर्माण गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा विज्ञानसम्मत छ ।
घर भनेको आफुले धेरै समय गुजार्ने स्थान हो । त्यस्तो स्थानको निर्माण गर्दा हावाको वहकाव, धरातलको अवस्था आदि सबै बिचार गर्नुपर्छ ।
यदि वास्तुशास्त्र अनुरुप उचित भूगोल, उचित दिशा, उचित आकार–प्रकार अपनाएर घर निर्माण गर्ने हो भने, त्यो प्राकृतिक, भौगोलिक सबै रुपले राम्रो हुन्छ । यसो हुनु भनेको घरमा सकारात्मक उर्जा प्रवाह हुनु हो ।
कर्मले भाग्य बदल्न सकिन्छ जन्मदै हाम्रो भाग्यरेखा तय हुन्छ ।
हामी जुन समय, परिस्थितिमा जन्मँदै, त्यस अनुरुप हाम्रो ग्रह–दशा आदि निर्धारित हुन्छ । तर, कर्म बलवान छ ।
कर्मले भाग्य बदल्न सक्छ । त्यसैले भाग्यमा हामी आशावादी हुन सकिन्छ ।
तर, भाग्य नै सबै कुरा होइन । भाग्यमा छ भनेर डोकोमा दुध दुहेर हुँदैन । भाग्यप्रति आशावादी हुने र कर्ममा विश्वास गर्ने गर्नुपर्छ ।
धर्म‘कर्म गर्ने, भाग्यमा आशावादी रहने’, युवा ज्योतिषी शिवराज रेग्मी भन्छन्